Ingubo Inspection Machine
ngeso lenyama Machine
Dip Iglu Machine
Edge ukutywina Machine
Machine olungabuyeli mva
I-Global Textile Machinery Market ukuba akhule kwindawo CAGR ye 8.28% ngethuba 2018-2022.
I-Global Textile Machinery Market 2018-2022, sele zilungiselelwe ngokusekelwe kuhlalutyo kwimarike olunzulu omnye izimvo ezivela noochwephesha kwezoshishino. Le ngxelo iquka imbonakalo kwiimarike kunye nasekukhuleni kwezoqoqosho kule minyaka izayo. Ingxelo iquka ingxoxo kubathengisi ezingundoqo ezisebenza kule emarikeni.
Ngokwe ngxelo, omnye umqhubi nempembelelo kule imarike yimfuneko ukufukuka ukuba amalaphu non-ephothiweyo. amalaphu Nonwoven ukuba echulwe iimveliso ngelaphu ukuba zivela kwimicu kutyiwa elifutshane okanye imicu eside oqhubekayo, ukusebenzisa imichiza okanye nisondelelane ngoomatshini ubuchule, yaye akazange ephothiweyo okanye ababezenzile. amalaphu Non-yokwaluka enziwa ziinkqubo-high speed nezixabisa kancinci.
Enye ukonakala echukumisa imarike lo matshini kwi textile noomatshini. Ukufunyanwa okuzenzekelayo kudlala indima ebaluleke kakhulu ekuphuculeni umgangatho kunye neendleko lokungakhuphisani textile mveliso. Ngokwayo textile oomatshini ibalekisa imveliso textile kwaye kwandisa isantya sokuqukuqela kwilaphu, ngolo hlobo bencedisa lemveliso ezinqinileyo. Ukufunyanwa okuzenzekelayo idlala indima ebalulekileyo ifayibha mveliso, vulu mveliso, ukwaluka, umbala, kunye neenkqubo ophela kuyo.
Ngaphezu koko, ingxelo ithi ukuba elinye ucelomngeni echukumisa bathengi amaxabiso umqhaphu aphezulu echaphazela kushishino ojikeleza. Umqhaphu omnye izinto eziphambili ekrwada kushishino ojikeleza le. Ukunyuka kwamaxabiso umqhaphu kuchaphazela noshishino lwempahla eyolukiweyo kwi yonke.
Idilesi: 1.NO.28, Qianjia Industrial Park, Yaoguan Town, District Wujin, Changzhou City, Jiangsu kwiPhondo, China